Uvimba-mpepha weSibhedlele-amaLungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Izicelo zabemi zokugcina iklinikhi yaseLoreley ngommeli
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 17. January 2012
Okulandelayo ngumzekelo ophambili wokulwa nedemokhrasi ethe ngqo ngqo. Endaweni yokuvavanya umbono wethu wokuba ngumsebenzi, abezopolitiko bayangxama ngokuchasene nesicelo sabemi kuzo zonke iziteshi, esibonisa ukuba sikumkhondo ofanelekileyo. Logama nje kungekho nkundla yezolawulo ithatha isigqibo, uxwebhu lwezikhalazo kubemi bethu alunakuvumeleka phantsi kwe §17 yekhowudi kamasipala. Namhlanje, kwaneJenali yaseburhulumenteni isetyenziswa gwenxa ekwakheni imood. Ngoku sicela isaziso esichaseneyo.
Abezopolitiko abafuna ukuvala isibhedlele saseLoreley basebenza ngeendlela ezingcolisayo ezisetyenziswa kuphela kumazwe angoozwilakhe. Umbutho weedolophu noomasipala unyukela enkundleni kwaye uluvo lwabo luthiwe thaca kubemi njengesigwebo senkundla yezolawulo. Abanye abemi bacele umnikelo kwimiboniso yamanyathelo amadala abemi “Ukulondolozwa kweeklinikhi zaseLoreley”, iinkampani ezizezinye zinikele ngaphezulu kwe- € 10.000 kumbutho wokuxhasa izibhedlele. Sifumene i- € 0 kwiminikelo kwaye isikhalazo sethu kubemi siyagxekwa kuba silandela iingcebiso zikaMehr Demokratie e. V. babhale inombolo yethu yeakhawunti yomnikelo kwiphepha.
Ithuba lokugcina iKlinikhi yeLoreley sisicelo sabemi kwidolophu nganye ye-3. Nabani na onendawo yakhe yokuhlala kwisixeko esithile kwaye ungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala unokutyikitya. Nceda usasaze amaxwebhu ngokubanzi kwindawo yakho.
Skrolela ezantsi ukukhetha phakathi kwe-Oberwesel, iSt. Goar kunye neHunsrück-Mittelrhein.
Ngomqondo omtsha womsebenzisi wePixelHELPER Foundation, sikhokela iikliniki zeLoreley kwikamva elikhuselekileyo!
Isicelo sabemi besixeko saseOberwesel
Cofa kumfanekiso ukukhuphela itemplate yokutyikitya. Oku kuya kufuneka kusasazwe kunye nomxholo wokusebenza.
Isicelo sabemi besixeko seSankt Goar
Isicelo sabemi base-Hunsrück-Mittelrhein
Gcina iikliniki zeLoreley. I-PixelHELPER Foundation engenzi nzuzo GmbH ifuna ukuthatha isibhedlele kwaye iqhubeke nokuyisebenzisa njengesisombululo sendlu. Ukuqikelelwa kokukhanya kwi-Ministry of Health eBerlin
Imeko yangoku 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX
Kwikhampasi yangoku ngo-Epreli ngo-2020 ye-CDU Oberwesel into engalunganga ibango, eyokuba ikliniki ayinakuba yinzuzo.
I-Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, njengoko igama lisitsho, yi-GmbH hayi i-GmbH engenzi nzuzo. Kuxolelwe kuphela kwezinye iirhafu kodwa hayi ukubonelela. Isishwankathelo, kufanele kuqatshelwe ukuba ukukhululwa kwirhafu yorhwebo,
Irhafu yokuthengisa kunye nerhafu yepropathi inikwe zonke izibhedlele ezihlangabezana neemfuno ze-§ 67 AO. Oku akukhathalekanga nokuba isibhedlele asisiyzuzo. Ukuxolelwa kwirhafu yomanyano kunikezelwa kuphela kwizibhedlele ezingenzi nzuzo ngaphakathi kwintsingiselo ye-§§ 51-68 AO. Okwangoku yi GmbH kubandakanya onke amathuba okurhoxisa imali. Amasebe ayevalwa kwaye itekhnoloji yesibhedlele yahanjiswa kwezinye izibhedlele. Inguqu ibe yi-GmbH engenanzuzo inokufezekiswa. Uncedo ngesicelo sabemi ukuze uqhubeke nokusebenza ngokungenanzuzo kweekliniki facebook.com/loreley-klinik Ngenkampani enamatyala angenamali yengeniso, imali eninzi kakhulu ikhona kunakwinkampani enamatyala amaninzi, akukho nzuzo inokuhamba kwakhona, kodwa kufuneka isetyenziselwe iinjongo ezingezizo zesibhedlele esitsha esingenzi ngeniso. Kwimeko yethu engaba yikliniki ngokwayo, iziko labadala kunye neworkshop entsha yabantu abakhubazekileyo kwindawo endala eSankt Goar. Ngolwazi oluthe kratya, skrolela ezantsi kweli phepha.
Imeko yangoku 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX
Siqala izikhalazo ezithathu kwizixeko zabanini zabelo ukuze kufezekiswe "intlanganiso yabanini zabelo engaqhelekanga" entsha icela iMarienhaus Holding GmbH ukuba idlulisele izabelo zakho ezingama-55% esibhedlele iye kwiPixelHELPER Foundation engenzi nzuzo GmbH, kanye njengokuba ubunikezele kwiRed Cross.
Ukongeza, isibhedlele kufuneka siguqulwe sibe yinkampani engenzi nzuzo ukugcina zonke izibonelelo kwinkampani kwixesha elizayo kwaye zingenzi izinto zokwabelana nabaninizabelo. Ukwenza oku, kufuneka siqokelele abatyikitywa abangama-300 kubavoti kwiqabane ngalinye lale ndawo, ukuba abaphathi besixeko abafumelani nesicelo sabantu, kwenziwa izigqibo zabemi.
I-PixelHELPER Foundation engenzi nzuzo GmbH iphuhlise ingcinga kwaye inikezela ngolondolozo kunye nokuqhubeka kwekliniki e-Oberwesel. Izibonelelo ezijolise ikakhulu ekubandakanyeni ziya kwenziwa kwindawo ye-Sankt Goar. Oku kubandakanya iindlela ezintsha zokuphila kwabantu abayi-8-16, kunye nendawo yokusebenzela edibeneyo yabantu abakhubazekileyo.
Isibhedlele e-Oberwesel kufuneka siphinde sisebenze onke amasebe eengcali afunekayo njengeyunithi yokhathalelo olunzulu ukuze isebenze njengesibhedlele esipheleleyo.
Ngokusebenzisana nentsebenziswano neDyunivesithi yaseMarburg kunye neenkampani zethekhinoloji yezonyango ekufutshane, indawo yokusebenzela yabakhubazekileyo iya kuvelisa izinto ezifanelekileyo neziqinisekisiweyo zokhuni eziya kusetyenziswa ukuthunyelwa e-Afrika.
Ukwakha indibano yokusebenzela entsha yabakhubazekileyo, kubandakanywa ukuhlala ngaphandle kwesithintelo, inkxaso-mali ukuya kuthi ga kwi-EUR 600.000 kufuneka ifakelwe isicelo kwiAktion Mensch.
Isiseko se-PixelHELPER sifuna ukubonisa ngokucacileyo ukuba iimfuno zoluntu olugugileyo zingafezekiswa njani ngendlela yala maxesha kunye nelizwe ejolise kwilizwe elizayo.
Ukuqinisekisa ukhuseleko lwezezimali, i-PixelHELPER Foundation iya kugxila ekuvuleleni iindawo ezintsha zenzuzo ukuze kuqinisekiswe ukuba iyaqhubeka njengesibhedlele esingenzi nzuzo. Silindele nokuba inkxaso-mali evela kwingxowa mali yesibhedlele iqhubeke nokusebenza ikliniki kunye yandisa.
Apha, iPixelhelper Foundation, ngokusebenzisa abaxhasi bayo, inokuthi iwele kwakhona kwinethiwekhi eyaziwayo kumgaqo-nkqubo wezempilo waseJamani.
Ngenxa yokuba inkampani engenzi nzuzo eyonqenayo ingenzi ingeniso yayo, akukho nzuzo yenziwayo kubanini zabelo, sitya imali kuyo nayiphi na intsalela eklinikhi nakwindawo yokusebenzela yabakhubazekileyo.
Ukugxininiswa kwesibhedlele esingenzi ngeniso ihlala kukuhle kwinto enye-kuyahambelana kwintlalontle yomntu ngamnye. Igama elithi "ingeniso" libalulekile kumthetho werhafu, kuba kuphela yimisebenzi edweliswe kumhlathi 52 wekhowudi yetax ethe yasebenza kuluntu ngokubanzi ethathwa njengengeniso-ngeniso yomthetho werhafu-umzekelo, imalunga nenkxaso-mali kwicandelo lezempilo. . Ukubuya, i-gGmbH inyanzelekile ukuba isebenzise imali eyenzelwe kuphela iinjongo ezingezizo zenzuzo.
Ke sifuna ukuba yiklinikhi engenzi nzuzo-kwaye yenze ngokuhambelana. Oku kusivumela ukuba sibe bhetyebhetye, nto leyo ethi ilungiselele isiguli. Kuba ke asisebenzi nje ngendlela enobuchule bokuthobela imigangatho yamva nje, kodwa nangokuhambelana nemigaqo-siseko elungileyo, esemgangathweni kunye noqoqosho- oku kuthetha ukuba sifuna ukusebenzisa zonke izixhobo zethu zemali kunye noluntu ukuze kuxhamle abaguli bethu.
Ngasemva: Isiseko sePixelHELPER sasekelwa iiFreemasons ezininzi kunye nomculi okhanyayo uOliver Bienkowski. EHamburg kukho isibhedlele seMasonic eRissen, eqhutywa ngurhulumente weCross Cross, ngokunjalo neKhaya leMinyaka yokuThola uMbindi kumbindi weHamburg. Isibhedlele saseFreemason eHamburg savula iingcango zaso ngo-Okthobha 3, 1795 eDammtorwall njengeziko lokuqala lokwamkelwa kwabantu abagulayo, ebeliswele ngokupheleleyo eHamburg. Yaqala ukumiselwa njengesibhedlele sabasebenzi ababhinqileyo kwaye yandiswa kwiminyaka embalwa kamva kubasebenzi abangamadoda.Xa ichithwa iPixelHELPER Foundation, ii-asethi zaya kuFreimaurer Hilfswerk eV, eyayiyinxalenye yombutho wesisa.
Imeko yangoku 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Sithetha nje sifuna ipropathi yokurenta edolophini i-Oberwesel. Siza kusebenzisa indawo leyo ukulungelelanisa izicelo ezi-3 zokugcina isibhedlele kunye nokuvelisa isonka esenziwe enkonkxiweyo kwiinkampu zeembacu kunye nabangenamakhaya. Nje ukuba indawo ifumaneke, uluhlu lwezityikityo kuzo zonke izixeko ezi-3 lunokukhutshelwa kweli phepha. Emva kokuqokelela iisiginitsha, ungangenisa uluhlu lwezikhalazo kuthi kwisiza. Uhlolo-zimvo luya kuqala phambi kuka-Meyi 01, 2020
Imeko yangoku 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Sibona ekusileleni ukukhankanya intengo yethu yokuthenga nguMarienhaus Ukubamba inkohliso ecacileyo yabanye abaninizabelo. I-PixelHELPER Foundation engenzi nzuzo i-GmbH iqhakamshele igqwetha lezomthetho e-Koblenz kunye nombutho uMehr Demokratie eV wokuvavanya ireferendamu ukuqala "intlanganiso yabanini zabelo engaqhelekanga yokurhoxisa isisombululo sika-Epreli 09.04.2020th, 1". Ukufakwa kwereferendamu kulungile, kodwa kufuneka kutshekishwe ngokusemthethweni. Uhlolo-zimvo luya kunyanzela abaphathi besixeko ukuba benze isigqibo kwintlanganiso engaqhelekanga yabanini zabelo. Igqwetha lomthetho wenkampani livavanya amanyathelo asemthethweni okhuphiswano. Ngomhlangano wabanini zabelo ongaqhelekanga, izabelo zinokwabelwa i-PixelHELPER Foundation gGmbH, kunye nokuqhubeka kokusebenza kwendlu e-Oberwesel kunokuqhubeka, njengokugcinwa kweziko labemi abaphezulu.
Nangona sithumele kabini isithembiso sethu sokuthatha imali kwisithethi senkampani yaseMarienhaus Ukubamba nge-imeyile, akukho mpendulo kwisicelo sethu ngaphandle kokuba umnxeba ubuye kuHeribert Frieling.
Isibhedlele iLoreley kunye neZiko laBantu abaDala liziko likarhulumente elibaluleke kakhulu e-Oberwesel. Kwintlanganiso yokugqibela yabanini zabelo ngo-Epreli 09.04.2020th, XNUMX, uMarienhaus GmbH khange asabele kule nto, nangona bekukho isibonelelo sokuthatha imali kwiPixelHELPER Foundation engenzi nzuzo GmbH, kwaye yonke imibuzo malunga noku, azikho ezinye izibonelelo zokuthatha. Sibona ulwaphulo-mthetho lokuchazwa gwenxa ngobuqhetseba. UMarienhaus uhambisa uluhlu lwezinto kwezinye izibhedlele kwaye ekugqibeleni ufuna ukukhusela iziko eliphezulu njengenkomo yemali. Abantu abazisebenzelayo abenza into enje eJamani bajongwa njengabaphuli mthetho. Nabani na ohambisa uluhlu lwezinto, okt iiasethi zesibhedlele, ngaphambi kokuba abhengeze njengongenatyala, unetyala. Isibhedlele sasityiwa nguMarienhaus GmbH sisiya kwezinye iiklinikhi ezifana neBingen. Sikhuthaza bonke abaninizabelo ukuba babuze uMarienhaus GmbH kwinkampani yesibhedlele iSt. Goar Oberwesel GmbH. Njengenkampani engenzi nzuzo, iSiseko sePixelHELPER asiyi kwenza naluphi na ulwabiwo lwenzuzo kodwa siya kukhokelela kwiziko eliphezulu nakwisibhedlele kwikamva ngenxa yezizathu zesisa.
Iirisithi zeminikelo ziya kuthunyelwa kwangoko. Irisithi yakho yokudlulisa yanele irisithi yomnikelo kwiofisi yerhafu ukuya kuthi ga kwi-250.
Ngokuqikelela ukukhanya kuloo nto Icandelo loMphathiswa Wezempilot Isiseko sePixelHELPER siguqukela kukuvalwa kweSt. IGoar / Oberwesel. Isiphakamiso sethu: Isiseko se-GmbH PixelHELPER esisisiNgeniso sithatha isabelo se-55% ukuba i-Rhineland Palatinate Ministry yezeMpilo ukusuka kwingxowa-mali yesakhiwo sesibhedlele, esele ibekelwe iintlawulo zokuqhawulwa kwenkonzo, kwimivuzo yabasebenzi, ukuqhubeka kokusebenza nokwandiswa kwesibhedlele, okuya kunika uPixelHELPER ithuba lokuhlaziya ikliniki nokugcina bonke abasebenzi besibhedlele i-Oberwesel ngaphezulu konyaka. Indlu eSt. Goar mayisetyenziselwe ukwakha oomatshini bokungenisa umoya wehlabathi lesithathu. IYunivesithi yaseMarburg kungekudala iza kuhambisa izixhobo ezilula zokungenisa umoya kwiAfrika eluntwini. Ngezixhobo ezenziwe ngamaplanga kunye neenxalenye ezilula ezivela kwivenkile ye-Hardware, ii-ventilators zinokwakhelwa amazwe angenayo inkqubo yesibhedlele esebenza ngoku. Ngapha koko, isiseko sePixelHELPER esine-ofisi yokusebenza kwiSibhedlele iSt I-Goar iseta ezinye izibonelelo zenkxaso engenzi nzuzo ezinje ngebhaki yesonka enkonkxiweyo ukuzinza okungakumbi kokutya, uququzelele umnyhadala wobugcisa obukhanyayo kwaye uthathe amanye amanyathelo okuxhasa abemi baseSt Goar nase-Oberwesel. Ubhubhane olandelayo uyeza, ngaphambi kweMfazwe ebandayo zazikho izibhedlele ezongezelelweyo ezingama-40 eJamani, ezazivalwe ngenxa yokonga. Ngamaxesha ebhubhane, asinakukwazi ukuvala izibhedlele ngakumbi. Impendulo kaJens Spahn elandelwa nge-imeyile, ebhekisa kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo eRhini-Palatinate. Izopolitiko kufuneka zithathe amanyathelo ngokukhawuleza ngoku. Yama-22 Izigidi zoncediso-mali kufuneka zikhutshelwe ukusebenza okuqhubekekayo kunye nemivuzo yesibhedlele kunye nenkampani entsha engenzi nzuzo inzame kufuneka yenziwe ukuba okungenani ihambise isibhedlele kwi-zero emnyama kwiminyaka embalwa ezayo, kuba ngokwahlukileyo kwiMarienhaus GmbH, GmbH engenzi nzuzo ayifanele ikhuphe nzuzo. Le inokuba yindlela elungileyo yokuphinda uvule isibhedlele e-Oberwesel ukuze kusebenze isibhedlele. Sibongoza iSebe lezeMpilo le-RLP ukuba likhulule imali kwiingxowa mali, ukuhambisa izabelo kwiPixelHELPER Foundation ukuya eMarienhaus GmbH nokusindisa abasebenzi kwiSibhedlele i-Oberwesel. Ukuze sikwazi ukuqhuba isibhedlele kunye nekhaya labantu abadala ngapha nangapha kukhathalelo olusisiseko olungcono. Urhulumente wase Rhineland-Palatinate ukwanyanzelekile ukuba asebenzise isibhedlele e-Oberwesel ngeenjongo zokuba abakhenkethi abatyelele kwiRhini eseMbindini, siyathemba ukuba abezopolitiko bazakunikezela. Ukunikezwa kokuthenga nge-imeyile kwisithethi senkampani uFrieling weMarienhaus GmbH akukaphendulwa. Kodwa ke sicinga ukuba njengo-Red Cross waseJamani, owanikwa isandla sika-55%, uMarienhaus GmbH uzimisele ukusinika isixa sama-55% kwi-euro enye.
Izicelo zabemi zokugcina iklinikhi yaseLoreley ngommeli Agasti 13th, 2020Oliver Bienkowski